Real-Time Ngwọta Iji Mma gị Email aka | Martech Zone
Ndị ahịa na-enweta ihe ha chọrọ site na nkwukọrịta email? Ndị ahịa ọ na-efu ohere ịme mkpọsa email dị mkpa, nke bara uru ma na-arụ ọrụ? Ndi ekwenti n’onu onwu nke ndi ahia email?
Dị ka ihe na-adịbeghị anya nyocha nke Liveclicker na-eduzi ma na-eduzi ya The Relevancy Group, ndị ahịa na-ekwupụta afọ ojuju ha na ozi ịntanetị metụtara ahịa na-egosi na ngwaọrụ mkpanaaka. Nnyocha nke ihe karịrị 1,000 na-ekpughe na ndị na-ere ahịa nwere ike na-efunahụ ndị ahịa zuru oke site na iji ekwentị mkpanaaka.
Pasent iri anọ na anọ nke ndị na-azụ ahịa e nyochara kwuru na ha achọghị ịnata ozi ahịa email na ekwentị ha n'ihi na ha na-enweta ọtụtụ ozi ịntanetị, ọtụtụ mgbe. Pasent iri atọ na asaa kwuru na ozi ndị a adịghị mkpa, pacenti iri atọ na abụọ kwuru na ozi ndị a pere mpe nke ukwuu iji soro ekwentị na-emekọrịta ihe.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (pasent 42) nke ndị na-eji ekwentị ha eme ihe na igbe ha iji kpebie ihe ha ga-agụ ma ọ bụ ịghara ịgụ ma emesịa ọ fọrọ nke nta ka otu ụzọ n'ụzọ atọ jiri ha dịka ngwaọrụ ha bụ isi, ọ dị ka ndị ahịa nwere nnukwu nsogbu.
O doro anya na nyocha anyị na ndị na-azụ ahịa na-atụ anya karịa n'aka ndị na-ere ahịa yana na idozi ederede email email naanị ezughị iji nweta uru asọmpi. Gbaso usoro nke gụnyere usoro ịchọrọ oge dị ka ngụkọta oge ma ọ bụ na-elekọta mmadụ nri, na ụfọdụ usoro ndị toro eto, dị ka ịhazi onwe na ọdịnaya weebụ, nwere ike ịmepụta ahụmịhe dị ike ma na-agbanye aka na agbanyeghị ngwaọrụ ọ bụla onye ahịa na-eji email, kama ọ bụ maka ndị na-azụ ọtụtụ ọrụ na njem. David Daniels, Otu Relevancy
Mana ọ dị ka ndị ahịa anaghị awụli elu na bandwagon iji mejupụta ụdị ngwaọrụ ndị a. N'akụkụ nke abụọ nke nyocha ahụ, nke jụrụ 250 enterprise na mid-marketers, The Relevancy Group chọpụtara na ọtụtụ ndị na-ere ahịa anaghị eji usoro aghụghọ eme ihe na-eme ka ozi email ahụ dị mkpa na gburugburu onye nnata - n'agbanyeghị ụdị ngwaọrụ ha jiri maka email, mana ihe kachasị mkpa maka ndị na-azụ ọtụtụ ọrụ na njem.
Naanị 16-37 pasent nke ndị na-ere ahịa kwuru na ha na-ahazi ọdịnaya dabere na ebe, oge mpaghara, weather, ụdị ngwaọrụ, ngwongwo ngwongwo or ụgwọ ọrụ iguzosi ike n'ihe. Ihe kpatara nke a yiri ka ọ bụ na ha enweghị nsogbu data na usoro mmezi mmemme.
N'iburu olu nke ahịa email na nnukwu ozi nke ndị na-azụ ahịa na-aga, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịlụ ọgụ maka ịnweta data nwere ike jikọtara ya na ọnọdụ dị n'otu oge iji chọpụta ụba ego na arụmọrụ bara uru. Ndị ọrụ ekwentị na-ama ọkwa ugboro ole ozi, yabụ iji usoro ndị na-enye ndị ahịa ohere ịnọrọ ugbu a na-enweghị ịbawanye ụba dị mkpa.
Mana ndị ahịa ekwesịghị ịtụ egwu, ebe ọ bụ na e nwere ụzọ dị mfe iji bido mejuputa usoro iji chebe oge iji mee ka mkpọsa ozi email na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu na mmejuputa ọkaibe.
Dịka ọmụmaatụ, n'iji teknụzụ oge eme ihe, ndị ahịa nwere ike ịpị bọtịnụ ngwa ngwa ngwanrọ na email dabere na ngwaọrụ ejiri dịka ozi a na-agụ. N'otu aka ahụ, ndị na-ere ahịa nwere ike ịkwado ihe okike ha iji gosipụta ma ọ bụ gosipụta ọdịnaya dabere na ngwaọrụ mkpanaka eji.
N'okpuru ebe a bụ ọkwa dị iche iche nke ọkaibe na ihe atụ nke ndị na-ere ahịa oge dị iche iche nwere ike ịmalite:
novice - Ngụda ngụọ, na-elekọta mmadụ faili ntanetịime
Intermediate - Ọnọdụ ederede, ezigbo oge A / B na vidiyo agbakwunyere
Advanced - Live web content, ahaziri deadlines
Ọkachamara: Nhazi nke oge site na iji isi mmalite data dị iche
On kasị ala ubube, ụzọ aghụghọ dị ka na-elekọta mmadụ faili na oge ngụda nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ọnọdụ ziri ezi, na-egosi mmụba 15 ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70 pasent na ọnụọgụ pịa-ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ozi ịntanetị na-anaghị agụnye ụdị ihe ahụ.
Nkwupụta a bụ oku na-eme ka ndị ahịa nwee ike ịzaghachi ihe ndị ahịa chọrọ ma ọ bụ bụrụ ndị nwere mbibi. Mmejuputa ihe ngwọta nke oge dabere na ọnọdụ azụmaahịa gị na akụrụngwa gị nwere ike ịgbanwe mgbasa ozi ịre ahịa email ma nwee mmetụta ọsọ ọsọ na ala. Iji mụtakwuo, gụọ akwụkwọ na-acha ọcha: thechọgharị Uru Ezigbo Oge Email - Marketingkwọ Ọsọ Drigba Ọsọ.
Banyere Real Realime Email site LiveClicker
Edere post a site na enyemaka nke Ozi RealTime site na Liveclicker, ikpo okwu iji dozie ezigbo ọdịnaya ọdịnaya, ule oge, nyocha na oge nyocha.
Tags: Ọnọdụ nkeonweOge ngụdaemailemail mepeeagbakwunyere videondu ndu onoNdụ weebụ dị ndụihe ọkụkụahaziri ụbọchịozugboezigbo oge A / B uleezigbo oge emailNhazi ogeozugboozugbo email
Etu ị si eji nyocha eme ihe maka nghọta siri ike ịre ahịa